Shiinaha Mashiinka Mashiinka khafiifinta cryolipolysis Xirfadle iyo Warshad | Kacay
Kuleylka: 37 ℃ -45 ℃
Gelinta: 220V / 50HZ 110V / 60Hz
Cadaadiska Hawada: 86Kpa-106Kpa
Magaca badeecada shaqo badan mishiinka slimming
Gelinta 220V / 50HZ 110V / 60Hz
Kuleylka 37 ℃ -45 ℃
Iftiin Casaan (630nm) Cagaar (570mm) 50mWX4
Dareeraha qaboojinta biyo saafi ah ama qaboojiye khaas ah
Fiyuus T3. 15AL250V
Heerkulka heerkulka 5-40
Qoyaan qaraabo ≤80%
Cadaadiska Hawada 86Kpa-106Kpa
Mashiinka Cryolipolysis aragti ahaan
triglyceride ee dufanka ayaa loo rogi doonaa mid adag gaar ahaan heerkul hoose, waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad heer sare ah si ay si xushmad leh u beegsato burooyinka dufanka leh ugana baabi'iso unugyada baruurta iyada oo loo marayo geeddi-socod barasho oo aan waxyeello u geysanayn unugyada ku xeeran. Marka unugyada baruurta ay la kulmaan heer kulka gaar ahaan qaboojinta, waxay kiciyaan geeddi-socodka ka saarista dabiiciga ah oo si tartiib tartiib ah u yareysa dhumucda lakabyada dufanka. Unugyada baruurta ee aagga daweynta ayaa si tartiib tartiib ah looga tirtiraa habka dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah ee jirka, si looga takhaluso baruurta aan loo baahnayn.
1. Slimid iyo dufan milmi
2. Adkee maqaarka, gabowga kahortaga
3. Hagaajinta wareegga dhiigga iyo dheef-shiid kiimikaadka
4. Nabaro siman iyo duuduub
5. siman gravidarum
6. In kor loo qaado unugyada laastikada ah ee fibroblastka ah
7. Miisaan dhaca, khafiifiya
8. Maqaarka oo adkeeya, laalaabidda maqaarka
9. Cusbooneysiinta Maqaarka: Adkee maqaarka, ka saarida duuduubka wanaagsan, maqaarka caddeeya.
10. dhimista cellulite
1). Ma jiraa waxyeello
daawo ma leh si loo yareeyo xanuunka, ma laha dhaawac soo noqnoqda ah, xanuun ma leh. Inta lagu guda jiro howsha daaweynta, nuugista xoogga leh waxay u horseeddaa khibrada bukaanka dareen raaxo leh oo sababa laakiin si tartiib tartiib ah ayey u baaba'daa, markaa ma jiro dareen gaar ah laakiin curyaannimo yar oo qabow.
2) Intee in le'eg ayay natiijooyinka soconayaan?
Bukaannada la kulma yareynta lakabka dufanka waxay muujinayaan natiijooyin joogto ah ugu yaraan lix bilood ka dib Habka daaweynta cryotherapy. Ka takhalusida unugyada dufanka leh ee ka dhashay Nidaamka loo yaqaan 'cryotherapy Procedure' ayaa la filayaa inay socoto illaa iyo inta unugyada baruurta laga saaro hababka waxyeellada u gala sida liposuction.
3) Intee in le'eg ayuu bukaanku u baahan yahay daaweyn?
Waqtiga hawshu wuxuu noqon karaa 1 ~ 2 saacadood ama ka badan iyadoo ku xiran cabbirka aagga la daaweynayo.
4). Mashiinka cryolipolysis: Ilaa intee in le'eg ayaan ogaanayaa natiijooyinka?
Dhimis la dareemi karo, oo la qiyaasi karo ayaa sida caadiga ah la arkaa laba ilaa afar bilood ka dib hal Hannaan oo loo yaqaan 'cryotherapy'.
Hore: 4 kumbuyuutar ayaa gacanta ku haya mashiinka khafiifa ee Cryolipolysis
Xiga: wajiga uumiga ayaa hogaaminaya mashiinka pdt
Multifunction cryolipolysis cavitation miisaanka l ...
360 hareeraha baruurta mishiinka xayira baruurta ee ...
qabow 360 mashiinka cryo xagal mishiinka lagu keydsho jirka ...